सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ कम्पनीको शेयर कारोबार आजबाट सुरु , कतिमा खुल्छ कारोबार? | Naya News Nepal
Home अर्थ व्यापार सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ कम्पनीको शेयर कारोबार आजबाट सुरु , कतिमा खुल्छ...
सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ कम्पनीको शेयर कारोबार आजबाट सुरु , कतिमा खुल्छ कारोबार?
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०९:४८
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर सुचिकृत भएको छ। कम्पनीको ८३ लाख ९४ हजार १ सय कित्ता शेयर सुचिकृत भएको हो । शेयर सुचिकृत भएसंगै बुधबारबाट कम्पनीको शेयर कारोबार सुरु हुने छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि १३८.७९ देखि ४१६.३७ रुपैयाँसम्मको सुरुवाती रेन्ज तोकेको छ । यो रेन्ज भित्रको जुनसुकै मूल्यबाट कम्पनीको पहिलो कारोबार हुन सक्ने छ । कम्पनीको CEDB सिम्बलबाट कारोबार हुने छ ।
Previous articleओलीको प्रस्तावमा ‘इमानदारिता नदेखिएको’ आरोप
Next articleफलफूलको राजा “आँप” बच्चादेखि बुढासम्मका व्यक्तिका लागि फाइदाजनक…
नवलरासीको प्रतापपुर कठहवामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु ;
हेलिकोप्टरमा उड्दा उड्दै मन्त्रि पद चैट
बारा र पर्सा मा मात्रै दैनिकी २ हजार बराबर को सिलिन्डर माग ; आपूर्ति मा...